မသိဘူး....ပေး - Cele Platform
” မသိဘူး.. ပေး”
တနှစ်ကို ဝင်ငွေ ၄၈သိန်း ကျော်လို့ ရှိရင် ဝင်ငွေခွန် ဆောင်ရမယ်တဲ့ ။ ဆောင်တယ်လေ ။
ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ပြီးတဲ့ ပိုက်ဆံထဲကမှ ..
ဘာစားစား အခွန်ကပ်တယ် ပိုဆိုးတာ ဝန်ဆောင်ခ နဲ့ ခုံကြေး ပါ ဆိုင်ကို ထပ်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ငါတို့က ကိုယ့်စားပွဲကိုယ်ယူလာပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝင်ချက်စားရ မှာလား?
အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ သမာအာဇီဝ ငွေဖြူနဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားတာကို ကုန်သွယ်ခွန် ထပ်ပေးနေရတော့ လူကပေါက်ချင်လာပြီ။ မသိရင် ဆိုင်နဲ့ ဗိုက်နဲ့ကို ငါတို့က ကြားက အရှုံးခံပြီး ကုန်သွယ်နေတာ ကျနေတာပဲ..
မီတာခသွားပေးတယ်။ တယူနစ်ဘယ်လောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး ယူနစ်ဘယ်နှရာကို ဘယ်လောက် တဲ့။ ဒါတောင် ၄ လပိုင်းထပ်တတ်ဦးမယ်ပြောတယ်။ ဘာကြောင့်တတ်သလဲ အခွန်တိုးကောက်ပြီး အာမခံနဲ့ မီးမှန်အောင်ပေးနိုင်မှာလား ဆိုတော့..
” မသိဘူး ပေး” တဲ့
ငါသိပ်စိတ်ရှည်တယ် ။ အိမ်ပြန်လာတယ် ..
” ဟဲ့ ငါ့မော်တာနဲ့ငါ အဝီစိက စုပ်တာ နင်တို့က သဘာဝ မြေအောက်ရေကို ဘယ်နား ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရလို့ ငါက အခွန်ဆောင် ရတာလဲဆိုတော့
“မသိဘူး .. ပေး ” တဲ့
စိတ်တိုတိုနဲ့ အီးဝင်ပါပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ မိလ္လာခွန် တဲ့.. လခွမ်း ငါ့မိလ္လာကန်ပြည့်တော့ နင်တို့ လာစုပ်ပေးလို့လား ပြုပြင်တာ ဘာညာလည်း တခါမှ လာမလုပ်ပဲနဲ့ ။ ငါ့ဖင်နဲ့ ငါ အီးပါတာ နင်တို့အခွန် ဘာလို့ဆောင်ရမှာတုန်း ဆိုတော့
” မသိဘူး ပေး” တဲ့..
တလောကပဲ ကြေငြာတယ် ။ ရှိတဲ့ ကားစုတ်ကလေးကိုတောင် အခွန်ဆောင်ပြီးသားငွေဖြူကို အခွန်ထပ်ပေးပြီး ဆီထည့် ၊ ခရီသွားရင် မိုင်အလိုက် အခွန်ထပ်ကောက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်တဲ့။
သိန်းတစ်သောင်းဆုပေါက်လို့ သိန်း ၁ သောင်းတန်ခြံဝယ်မယ်အခွန်က သိန်း သုံးထောင့်ငါးရာဆောင်ရမယ်။ ဘာဝယ်ဝယ် သိန်းတစ်ထောင် ကျော်ရင် ၃၅%ဆောင် ။ ငွေဖြူတွေ ဘာတွေ လာမပြောနဲ့ မသိဘူး ပေး ပဲ။
ဟူးးးး သက်ပြင်းချပြီး ညစ်ညစ်နဲ့ တီဗွီထဖွင့်တယ် ။ အင်း ဒါကြီးလည်း ဝယ်တုန်းက အခွန်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။ channel line တွေလည်းအခွန်ပေးနေရတာပဲ။ လန့်ပြီး ထိုင်နေတဲ့ ဆိုဖာကြီးကြည့်လိုက်တော့ ဒါကြီးလည်း အခွန်ပါတာပဲဟ။
ဇောချွေးတွေပြန်လာလို့ တစ်ရှူးထယူတယ် ဒါလည်း အခွန်ဆာင်ထားရတာပဲ။ တအိမ်လုံး အခွန်လွတ်တာ ဘာမှ မရှိဘူး။ ရင်ပူပြီး ရေခဲသေတ္တာ ထဖွင့်တယ်။ အထဲက အစားအသောက်တွေ မှန်သမျှ အခွန်လွတ်တာ တစ်ခုမှ မရှိဘူး။
ကိုယ်တွေးပြီ။ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အခွန်ဆောင်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအရ အခွန်ထမ်း ပြည်သူတစ်ယောက် ပြန်ရပိုင်ခွင့် ဘာတွေ ပြန်ရနေသလဲ …
1. လုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု
2. ပညာသင်ဆု /ပညာသင်ချေးငွေ
3. လူမှုဖူလုံရေး အထောက်အပံ့
ဘာမှလည်း ပြန်မရဘူး။ ဒါသက်သက် ဂျင်းထည့်ခံရတာ ။ မကျေမနပ်နဲ့ Facebook ထပွတ်တော့ .. ဘာမှသာ ပြန်မရတာ အဲ့လောက် ရူးခါနေအောင် အခွန်ဆောင်နေရင်းက ပြည်သူတစ်ယောက်ကို ၈ သိန်းနီးပါး အကြွေးတင်နေတာတဲ့တော် ။ အံ့ကြီးကို သြရော..
မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ကာစတန်က သူငယ်ချင်းကို ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပေးပြီး ဘေလ်ဖြည့်ထားတဲ့ ဖုန်းနဲ့ သိချင်တာတွေ ဖုန်းဆက်မေးတာ ဟိုက ဘာပြန်ပြောလည်း သိလား???
“မသိဘူး.. ပေး ” တဲ့ ။ မြခွါညို/​မောင်​စွယ်​စုံကျမ်း
” မသိဘူး.. ပေး”
တနှဈကို ဝငျငှေ ၄၈သိနျး ကြျောလို့ ရှိရငျ ဝငျငှခှေနျ ဆောငျရမယျတဲ့ ။ ဆောငျတယျလေ ။
ဝငျငှခှေနျဆောငျပွီးတဲ့ ပိုကျဆံထဲကမှ ..
ဘာစားစား အခှနျကပျတယျ ပိုဆိုးတာ ဝနျဆောငျခ နဲ့ ခုံကွေး ပါ ဆိုငျကို ထပျပေးရတယျ။အဲ့တော့ငါတို့က ကိုယျ့စားပှဲကိုယျယူလာပွီး ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဝငျခကျြစားရ မှာလား?
အခှနျဆောငျထားတဲ့ သမာအာဇီဝ ငှဖွေူနဲ့ ကိုယျ့ထမငျးကိုယျစားတာကို ကုနျသှယျခှနျ ထပျပေးနရေတော့ လူကပေါကျခငျြလာပွီ။ မသိရငျ ဆိုငျနဲ့ ဗိုကျနဲ့ကို ငါတို့က ကွားက အရှုံးခံပွီး ကုနျသှယျနတော ကနြတောပဲ..
မီတာခသှားပေးတယျ။ တယူနဈဘယျလောကျဆိုတာမဟုတျဘူး ယူနဈဘယျနှရာကို ဘယျလောကျ တဲ့။ ဒါတောငျ ၄ လပိုငျးထပျတတျဦးမယျပွောတယျ။ ဘာကွောငျ့တတျသလဲ အခှနျတိုးကောကျပွီး အာမခံနဲ့ မီးမှနျအောငျပေးနိုငျမှာလား ဆိုတော့..
” မသိဘူး ပေး” တဲ့
ငါသိပျစိတျရှညျတယျ ။ အိမျပွနျလာတယျ ..
” ဟဲ့ ငါ့မျောတာနဲ့ငါ အဝီစိက စုပျတာ နငျတို့က သဘာဝ မွအေောကျရကေို ဘယျနား ဘယျလို ထိနျးသိမျးရလို့ ငါက အခှနျဆောငျ ရတာလဲဆိုတော့
“မသိဘူး .. ပေး ” တဲ့
စိတျတိုတိုနဲ့ အီးဝငျပါပွီး ပွနျထှကျလာတော့ မိလ်လာခှနျ တဲ့.. လခှမျး ငါ့မိလ်လာကနျပွညျ့တော့ နငျတို့ လာစုပျပေးလို့လား ပွုပွငျတာ ဘာညာလညျး တခါမှ လာမလုပျပဲနဲ့ ။ ငါ့ဖငျနဲ့ ငါ အီးပါတာ နငျတို့အခှနျ ဘာလို့ဆောငျရမှာတုနျး ဆိုတော့
” မသိဘူး ပေး” တဲ့..
တလောကပဲ ကွငွောတယျ ။ ရှိတဲ့ ကားစုတျကလေးကိုတောငျ အခှနျဆောငျပွီးသားငှဖွေူကို အခှနျထပျပေးပွီး ဆီထညျ့ ၊ ခရီသှားရငျ မိုငျအလိုကျ အခှနျထပျကောကျဖို့ စီစဉျနတေယျတဲ့။
သိနျးတဈသောငျးဆုပေါကျလို့ သိနျး ၁ သောငျးတနျခွံဝယျမယျအခှနျက သိနျး သုံးထောငျ့ငါးရာဆောငျရမယျ။ ဘာဝယျဝယျ သိနျးတဈထောငျ ကြျောရငျ ၃၅%ဆောငျ ။ ငှဖွေူတှေ ဘာတှေ လာမပွောနဲ့ မသိဘူး ပေး ပဲ။
ဟူးးးး သကျပွငျးခပြွီး ညဈညဈနဲ့ တီဗှီထဖှငျ့တယျ ။ အငျး ဒါကွီးလညျး ဝယျတုနျးက အခှနျဆောငျခဲ့ရတယျ။ channel line တှလေညျးအခှနျပေးနရေတာပဲ။ လနျ့ပွီး ထိုငျနတေဲ့ ဆိုဖာကွီးကွညျ့လိုကျတော့ ဒါကွီးလညျး အခှနျပါတာပဲဟ။
ဇောခြှေးတှပွေနျလာလို့ တဈရှူးထယူတယျ ဒါလညျး အခှနျဆာငျထားရတာပဲ။ တအိမျလုံး အခှနျလှတျတာ ဘာမှ မရှိဘူး။ ရငျပူပွီး ရခေဲသတ်ေတာ ထဖှငျ့တယျ။ အထဲက အစားအသောကျတှေ မှနျသမြှ အခှနျလှတျတာ တဈခုမှ မရှိဘူး။
ကိုယျတှေးပွီ။ပွညျသူတဈယောကျအနနေဲ့ အခှနျဆောငျရတာ ဂုဏျယူပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နိုငျငံတကာ စံနှုနျးအရ အခှနျထမျး ပွညျသူတဈယောကျ ပွနျရပိုငျခှငျ့ ဘာတှေ ပွနျရနသေလဲ …
1. လုံလောကျတဲ့ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု
2. ပညာသငျဆု /ပညာသငျခြေးငှေ
3. လူမှုဖူလုံရေး အထောကျအပံ့
ဘာမှလညျး ပွနျမရဘူး။ ဒါသကျသကျ ဂငျြးထညျ့ခံရတာ ။ မကမြေနပျနဲ့ Facebook ထပှတျတော့ .. ဘာမှသာ ပွနျမရတာ အဲ့လောကျ ရူးခါနအေောငျ အခှနျဆောငျနရေငျးက ပွညျသူတဈယောကျကို ၈ သိနျးနီးပါး အကွှေးတငျနတောတဲ့တျော ။ အံ့ကွီးကို သွရော..
မခံနိုငျတဲ့အဆုံး ကာစတနျက သူငယျခငျြးကို ကုနျသှယျခှနျ ၅% ပေးပွီး ဘလျေဖွညျ့ထားတဲ့ ဖုနျးနဲ့ သိခငျြတာတှေ ဖုနျးဆကျမေးတာ ဟိုက ဘာပွနျပွောလညျး သိလား???
“မသိဘူး.. ပေး ” တဲ့ ။ မွခှါညို/​မောငျ​စှယျ​စုံကမျြး
ဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်